- अन्डामा समेत अखाध्य वस्तु मिसाइन थालियो
अन्डामा समेत अखाध्य वस्तु मिसाइन थालियो
काठमाडौंः मानिसको आवश्यक पोषक तत्वको माग पूरा गर्न अण्डा दैनिक रुपमा उपभोग हुँदै आएको छ । अण्डामा भिटामिन ए, फोलेट, भिटामिन बी टू, भिटामिन बी फाइभ, भिटामिन बी १२, फस्फोरस, सेलेनियम, भिटामिन डी, र्इ, के तथा जिंक लगायतका तत्व पाइन्छन् । यस्ता विभिन्न खाले पोषक तत्वले अण्डा भरिपूर्ण हुने हुँदा विश्वव्यापी रुपमा अण्डाको उच्च उपभोग हुँदै आएको छ । नेपालमा समेत दैनिक ३५ लाखको हाराहारीमा अन्डाको उपभोग हुँदै आएको छ । मानिसको शरीरलाई चाहिने विभिन्न पोषक पदार्थको भरणपोषण गर्न उपभोग हुने अण्डाले कतै उल्टै हाम्रो स्वास्थ्यप्रति हानि त गरिरहेको छैन ?
अण्डा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हो र यसले मानिसको जिउलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुरयाउँछ ।
। पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुनुका साथै क्याल्सियम, आइरन तथा प्रोटिनजस्ता तत्वको भण्डारको रुपमा रहेको अण्डाको सेवनले शरीरलाई चाहिने दैनिक पौष्टिक तत्वको भरणपोषण गर्न सहयोग पुरयाउँछ । अण्डालाई पोषण विज्ञहरुले सुपर फुडको रुपमा व्याख्यासमेत गर्ने गरेका छन् । यस्तो गुणकारी अण्डा उपभोग गर्दा मोटोपन घटाउन सहयोग, आँखाको शक्तिमा वृद्धि, रक्तचाप नियन्त्रण, मुटुको जोखिम न्यूनीकरण जस्ता विभिन्न प्रकारका फाइदाहरु हुन्छन् ।
तर हामीले उपभोग गरिरहेको अण्डा कत्तिको गुणस्तरीय छ त ? यसको उत्तर दिन सरकारले विभिन्न स्थानबाट अण्डाको संकलन गरी परीक्षण गर्न जरुरी छ । हालै पोल्यान्डमा अण्डामा अखाध्य वस्तु मिसिएको भेटिएको छ । अखाद्यपदार्थ भेटिएपछि ४३ लाख अण्डा बजारबाट फिर्ता गरिएको छ । यस्तै गत वर्ष अण्डामा अखाध्य वस्तु भेटिएकै कारण ४५ मुलुकमा अण्डा नष्ट गरिएको थियो । २०१७ मै प्रदूषित अण्डाबाट प्रभावित युरोपियन मुलुकहरुमा ७ लाख अण्डा नष्ट गरिएको हो ।
नियमित प्ररीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्ता अण्डा भेटिन्छन् भने नेपालजस्तो देश जहाँ खाद्य वस्तुको प्ररीक्षणलाई ध्यान दिइँदैन, यहाँ यस्ता हानिकारक अण्डा नभेटिएलान् भन्न सकिन्न। कुखुरालाई मोटो बनाउन, छिटो अण्डा कोरल्न, फिप्रोनिल प्रयोग हुने गरेका छन् । कीराहरु नष्ट गर्न प्रयोग हुने फिप्रोनिललाई विश्व खाद्य संगठनले खाद्य उद्योगमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । फिप्रोनिल बढी मात्रामा सेवन गर्दा मानिसको मृगौला, कलेजो, थाइराइडजस्ता ग्रन्थिलाई हानि गरी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ ।
दैनिक उपभोग हुने यस्ता खाद्य सामग्रीप्रति सरकारले निरन्तर रुपमा प्ररीक्षण गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ भेटिएमा त्यसलाई प्रतिबन्ध गरी त्यसको उत्पादकलाई समेत कारबाही गर्न जरुरी छ । मानिसको स्वास्थ्यप्रति हेरचक्राँइँ गर्ने अधिकार कसैसँगै नभएको र गरेमा त्यसलाई कारबाही गरी जिम्मेवार सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।